Izakhelo zekhathalogu | Creatives Online
Ngaba unayo i-eCommerce okanye kufuneka ubonise iimveliso zakho ngekhathalogu kwaye awuyazi indlela yokuyakha? Ngaba uyazi ukuba kukho iitemplates zeekhathalogu? Ewe kunjalo! Ukuba unevenkile ye-intanethi kwaye kufuneka unikezele ngenkangeleko yobungcali kuba ufuna ukuba ngumsasazi wemveliso yakho kwezinye iivenkile zendawo kunye namashishini, ngoko kufuneka ufumane ikhathalogu elungileyo ebonisa ubuchule bakho.
Kodwa ukwenza njani? Ukususela ekuqalei? Hayi, iitemplates zekhathalogu zinokufumaneka kwi-Intanethi. Kwaye yile nto siza kuthetha ngayo ngokulandelayo. Asiyi kukuxelela nje ukuba kutheni kubalulekile ukuba nekhathalogu elungileyo, kodwa siya kukunika izixhobo ukuze uzenze kwimiba yemizuzu okanye iiyure ukuba unokuninzi okufakayo.
1 Yintoni ikhathalogu, yenzelwe ntoni kwaye kutheni ibalulekile?
2 Izakhelo zeCatalog ezigqwesileyo
2.1 Iikhathalogu zezokwakha
2.2 Iitemplates zekhathalogu yeemveliso
2.3 Iikhathalogu zefashoni
2.4 Itemplate yekhathalogu encinci
2.5 Ithempleyithi yekhathalogu yepotfoliyo
2.6 template imveliso Generic
2.7 Incwadana yeeMveliso zokuQokelelwa
2.8 Iitemplates zekhathalogu zabafoti, ababonisi, ababhali
2.9 Ikhathalogu ithempleyithi zokutyela
Yintoni ikhathalogu, yenzelwe ntoni kwaye kutheni ibalulekile?
Ikhathalogu luxwebhu, olunokuthi lube ngumzimba okanye olubonakalayo, apho uluhlu lweemveliso ezineempawu zazo zinikezelwa. Kukho iintlobo ezininzi zeekhathalogu, ukusuka kwezo ziphucula umfanekiso ukuze "ungene ngamehlo" ukuya kwezo ziluluhlu nje lweemveliso kunye nexabiso labo.
Ukusetyenziswa kwayo ngokwenene kwahluke kakhulu. Umzekelo, ikhathalogu inokuba yenye enevenkile ethengisa ukutya apho unokuodola khona iimveliso ezininzi kunokuba iqhele ukuzisa, kwaye ikunika uluhlu lweemveliso. Okanye inokuba ziilori ezihambisa ukutya (ezidla ngokuba ngumkhenkce) ezithwala ikhathalogu ukuze iodolwe ngokwenombolo yereferensi (okanye ngokomfanekiso ohamba nemveliso).
Ikhathalogu rhoqo iya kubandakanya ukhetho lweemveliso ethengiswa ngazo Kwaye yinto esele ikwimeko njengoko iyindlela yokudibanisa into ethengisiweyo (kwimeko yeevenkile ze-intanethi ivumela ukunxulumana nokuthengiswa kweemveliso kwi-Intanethi kunye "nawe kuwe").
Ngoku, kutheni ikhathalogu ibaluleke kangaka? Makhe sithathe umzekelo. Khawufane ucinge ukuba ungumyili wegraphic kwaye uthathe isigqibo sokuvula ivenkile ngemizobo yakho. Unazo zonke kwi-Intanethi, kodwa ngequbuliso ivenkile kwindawo ohlala kuyo inxibelelana nawe kwaye ikucela ukuba ubathumelele ikhathalogu yeemveliso zakho kuba bangathanda ukubona yonke into onayo. Ngaba uya kumxelela ukuba angene kwiphepha kwaye azulazule ukuze alibone? Oko bekungayi kujongeka njengengcali kakhulu.
Kwelinye icala, ukuba unekhathalogu yemveliso, apho imveliso kunye nexabiso ziboniswa, awucingi ukuba ziya kuboniswa ngcono? Ngale ndlela umnika into ebonakalayo anokuyijonga ngaphandle kwe-Internet, iselfowuni okanye ikhompyutha.
Ukubaluleka kwekhathalogu kulele ekwenzeni into engabonakaliyo "iphathekayo". Awunakuhamba nazo zonke iimveliso ukuya ezivenkileni, kuba awuzukuba nendawo yezinto. Kodwa ikhathalogu iyakunceda ukuba unikezele ngesampulu yayo yonke into onokuthi uyinike loo nkampani, uziqeshileyo okanye umntu ngamnye, ukuze bathathe isigqibo malunga nokuba bathenge ntoni.
Izakhelo zeCatalog ezigqwesileyo
Nokuba ungumyili wegraphic, umnini we-eCommerce, usomashishini, uzimele ..., Ukuba unemveliso yokuthengisa, udinga ikhathalogu yazo. Kwaye kuba singafuni ukuba uqale ukusuka ekuqaleni, kuthekani malunga nokuzama ezi templates zekhathalogu?
Apha sidibanise ukhetho lwazo.
Apha sibonisa ezinye iitemplates zekhathalogu yokwakha, nangona ingasetyenziselwa ukurenta okanye ukuthengiswa kwezindlu.
Nangona i-priori unokucinga ukuba isebenza kuphela loo nto, inyaniso kukuba xa sele ungaphakathi, njengoko unokuphinda uthintele, uhlala ufumana enye ukusetyenziswa.
Iitemplates zekhathalogu yeemveliso
Ngaba unayo ivenkile okanye ucelwe ukuba wenze ikhathalogu yemveliso? Kulungile endaweni yokuqala ukusuka ekuqaleni, apha unokuba neetemplates zekhathalogu apho kufuneka wenze kuphela beka iifoto, utshintshe iinkcazo, izihloko kunye namaxabiso, kwaye uya kuwugqiba umsebenzi ngokukhawuleza kakhulu.
Ukuba umsebenzi ekufuneka uwenze, okanye into oyenzayo yifashoni, nantsi enye apho, Nangona iifoto ziyeyona nto ibalulekileyo, kukho nendawo yokubhaliweyo ukuze uchaze okanye ubeke amaxabiso.
Itemplate yekhathalogu encinci
Kule meko unayo ikhathalogu eya kwinto ehambayo, bonisa iimveliso. Nangona kunjalo, iyakwenza ukuphucula umfanekiso jikelele kunye neefoto ezincinci zeemveliso, kunye neempawu zazo kunye namaxabiso.
Ithempleyithi yekhathalogu yepotfoliyo
Ngaba uyakhumbula imeko ebesikhe sayikhankanya ngaphambili malunga nomzobi? Into eqhelekileyo kukuba unepotfoliyo enezona zoyilo, kodwa kuthekani ukuba unevenkile? Ewe, uya kufuna ezinye iitemplates zekhathalogu ukubonisa into oyithengisayo.
Apha kukho umzekelo waloo nto, apho ifunwa khona Khonza njengepotfoliyo kunye nekhathalogu, ngemifanekiso ekumgangatho ophezulu kwaye kulula kakhulu ukuyihlela.
template imveliso Generic
Ukuba unemveliso ezininzi ezenziwe ngabenzi, okanye ezisebenzisa umfanekiso ofanayo kodwa ezinemibala eyahlukileyo, le isenokuba yithempleyithi obuyifuna.
Kuye iimveliso zidweliswe kodwa ngeefoto kunye nemibala ekhoyo. Ukwanayo neefoto ezinkulu kunye / okanye ezincinci ecaleni kwayo ukuba ufuna ukubonisa ekunene kwaye umva okanye amacala amabini emveliso.
Uyikhuphela kwi apha.
Incwadana yeeMveliso zokuQokelelwa
Ukuba ufuna ntoni Akukona nje ukubonisa iimveliso, kodwa nokunika umxholo othile (ukubalisa ibali kusefashonini kwaye kuya kuqhubeka kunjalo), ke kufuneka ubheje kule nto.
Le yikhathalogu ebonisa izinto ezimbalwa, kodwa ishiya indawo eninzi yokubhaliweyo kwaye ayidibanisi kakhulu iphepha.
Iitemplates zekhathalogu zabafoti, ababonisi, ababhali
Le yenye yeetemplates zekhathalogu esithanda kakhulu kweli qela, kuba nangona iifoto zifakwe kuyo, mhlawumbi isicatshulwa esinobunzima obuninzi. Kwaye nangona kubonakala ngathi akunjalo, Ukukhapha umfanekiso onamagama ameleyo kunokuthengisa ngcono kakhulu.
Ikhathalogu ithempleyithi zokutyela
Ngaba kufuneka wenze ikhathalogu yeendawo zokutyela? Akukho nto yakwenza kwakhona, apha unethempleyithi enokukusebenzela, okanye uyichukumise ukuze ikuncede.
Njengoko ubona, kukho iindlela ezininzi zokukhetha phakathi kweetemplates zekhathalogu. Ewe kunjalo, ukuba awuyifumani le uyikhangelayo kwezi, sicebisa ukuba ujonge kwi-intanethi kuba zininzi iindlela onokukhetha kuzo ezinokuza luncedo. Ngaba uyafuna ukucebisa enye oyisebenzisa kakhulu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Izakhelo zekhathalogu
Hlanganisa iileya kwiPhotoshop